Android TV ga - abụ Google TV dika asịrị ọhụrụ | Gam akporosis
Anyị na-eche asịrị ihu, iji mee ka o doo anya, mana anyị nwere ozi anyị n'aka Google na-ezube ịnyegharị gam akporo TV na Google TV. Ọ bụghị oge mbụ nnukwu G na-akpọgharị ọrụ ma anyị nwere ike ịbịaru ụlọ Google ahụ dịka otu n'ime mgbanwe ndị kachasị ọhụrụ.
Mgbanwe a nke wepu ika gam akporo nke ngwaahịa ha abụghị ihe ọhụụ ma chọọ ịbịaru ha nso na Google nke yiri ka ọ ga-adọrọkwu dị ka ụmụ okorobịa nọ n'azụ mkpebi ndị a si dị.
Ihe niile metụtara ya Okwu nke Google nke o kwuru na gam akporo dị ka ika nke ọ na-agaghị ebe ọ bụla. Fọdụ n'ime mgbanwe ndị a kacha mara amara, na afọ ndị gara aga, bụ ịgbanwe aha ngwa na egwuregwu egwuregwu vidiyo sitere na Ahịa gam akporo na Playlọ Ahịa Google. Ọ na-ada ụda dị ka ịkpọ ya aha mbụ, mana ọ dịla na mgbanwe ndị ọzọ.
A makwaara gam akporo Pay Pay dị ka Google Pay. Na anyị pụrụ ọbụna ịhụ a radikal mkpochapu site na iwepu gam akporo ika na gam akporo Ozi na-ahapụ ya dị ka bụ na-enweghị n'ihu ado. Android Wear gara Wear OS na yabụ anyị nwekwara ike ịga ọtụtụ ngwa dịka Allo, Duo na ndị ọzọ nke a hapụrụ naanị ha na-enweghị ụdị akara ọ bụla.
Google TV na-ada ụda ma sie ike, ọ bụ ezie na anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ngbanwe nke aha ma ọ bụ na Google na-ezube ịkpọrọ ya gaa ebe ndị ọzọ. Mana dịka anyị kwuworo, ka ọ dị ugbu a ọ bụrụ asịrị ka aghara aghara na ikekwe ọ dị ka balloon nyocha iji hụ otu o si daba n'etiti echiche ọha na eze na ndị ọkachamara n'ọhịa. Google TV gụnyere ihe kariri gam akporo TV (nke ị nwere nkwado site na NewPipe); nke ikpeazu di ka ogwe aka ozo nke anabatara site na os rue nyiwe ma obu ngwaọrụ ndi ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-ezube ịnyegharị Android TV na Google TV